ရည်းစားဟောင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုစကား ပြောလာတဲ့ နေခြည်ဦး
မန္တလေးရောက်တုန်း သူ့ရဲ့ ဆိုင်သစ်လေးကို ဝင်လည်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်က လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ရည်းစားဟောင်းရဲ့ ဆိုင်ကို နေခြည်ဦးက သွားလည်ခဲ့တာပါ.မန္တလေးကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရင်း ဝင်လည်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.
Photo : နေခြည်ဦး FB
နေခြည်ဦးက မန္တလေးကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရင်း ရည်းစားဟောင်း ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်လေးကို ဝင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်က လမ်းခွဲခဲ့တာပါ။ လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship က သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ အင်တာဗျူး တော်တော်များများ မှာ နေခြည်ဦးက ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလည်း ချစ်သူဟောင်းရဲ့ ဆိုင်ကို ဝင်လည်ရင်း သူ့အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေးလည်း ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“နင့်အတွက် အရမ်း ဂုဏ်ယူတယ် ဘာမှ ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံပါတယ်။ (Especially food and shisha) ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီလို တစ်ဆိုင်လောက်လာဖွင့်စမ်းပါဟာ!! “ ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဒီဇင်ဘာ(၁၅) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ရည်းစားဟောင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပြောရင်းနဲ့ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တင်ထားပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာလည်း ရည်းစားဟောင်း အောင်နွေဦးက “အေးနင့်အိမ်နားမှာလာဖွင့်မယ်" ဆိုဓြီး ပြန်ပြောထားပါသေးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ နေခြည်ဦးရဲ့ ပရိသတ်တွေက ပြန်ပြီး အဆင်ပြေစေချင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
နေခြည်ဦးတို့ စုံတွဲဟာ နားလည်မှုတွေနဲ့အတူ နှစ်ဦးသဘောတူ လမ်းခွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ေနခြည်ဦးကို ပရိသတ်တွေက Beauty Blogger တစ်ဦးအနေနဲ့ စတင်အားပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့ သူမက Beauty Bloggerတစ်ဦးအနေနဲ့သာမက အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ဆောင်ရွက်လို့နေပါပြီ။
သူပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း ရှိနေလိုသလို ယခုလက်ရှိ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ “ရန်သူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း သူမအတွက် ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း “ဧည့်သည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ “အောက်ဖဲမလှန်ကြေး” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။